BackGround History » University of Computer Studies, Loikaw
Faculty of ICT Supporting and Maintenance
Computer University (Loikaw) was opened asacomputer training center at the office of the Union Solidarity and Development Association (USDA) in 2001, February 21 according to the program of USDA. In 2003, March 27 it was opened as Government Computer Collage (GCC) and it has been upgraded to Computer University level since 2007, January 20.
ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်း၏ အစီအစဉ်ဖြင့် ကွန်ပျူတာသင်တန်းကျောင်းကို ၂၀၀၁ခုနှစ်၊ ဖေဖော်ဝါရီလ (၂၁)ရက်နေ့တွင် လွိုင်ကော်မြို့၊ ပြည်ထောင်စုကြံ့ခိုင်ရေးနှင့် ဖွံ့ဖြိုးရေးအသင်းရုံးဝန်းအတွင်းဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်။ ၂၀၀၃ခုနှစ်၊ မတ်လ (၂၇)ရက်နေ့တွင် အစိုးရကွန်ပျူတာကောလိပ်အဖြစ် ပြောင်းလဲဖွင့်လှစ်ခဲ့ပြီး ၂၀၀၇ခုနှစ်၊ ဇန်နဝါရီလ (၂၀)ရက်နေ့တွင် ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်အဖြစ် အဆင့်မြှင့်တင်ဖွင့်လှစ်နိုင်ခဲ့ပါသည်။
Computer University (Loikaw) is situated in No(144/164), Htaythama Grand, Chikal Village Track, Northwest of Loikaw. The area of the campus is 76.09 acre. The new three storey main building is located at the current area of the campus.
ကွန်ပျူတာတက္ကသိုလ်(လွိုင်ကော်)သည် လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ ချိကယ်ကျေးရွာအုပ်စု၊ ထေးသမကွင်း၊ အမှတ်(၁၄၄/၁၆၄)၌ တည်ရှိပါသည်။ တက္ကသိုလ်အကျယ်အဝန်းမှာ (၇၆.၀၉)ဧကကျယ်ဝန်းပြီး ပင်မသုံးထပ်ကျောင်းဆောင်သစ်ကြီးကိုလည်း တည်ဆောက်ထားပြီး ဖြစ်ပါသည်။
Copyright © 2016 University of Computer Studies (Loikaw). All Rights Reserved.